China iyo Inoshanda Inesimba Yesesimba Brake Booster fekitori uye vanotengesa | TieLiu
Iko Kushanda Nhungamiro Yesemagetsi Brake Booster
Iyo yekubvisa booster inoshandisa chirevo chekuyamwa mumhepo kana injini iri kushanda, iyo inogadzira iyo vacuum kune yekutanga chikamu cheiyo booster. Mukupindura kune musiyano wekumanikidza weyakajairwa mweya kumanikidza kune rimwe divi, musiyano wekumanikidza unoshandiswa kusimbisa iko kusimuka.
Kana paine chero musiyano mudiki wekumanikidza pakati pemativi maviri edhayaphira, nekuda kwenzvimbo hombe yedhayaphira, kukweva kukuru kunogona kugadzirwa kuti isundire diaphragm kusvika kumagumo ine yakaderera kumanikidza. Paunenge uchimisa mabhureki, iyo yekuvharisa booster system inodzorawo vacuum inopinda mune inosimudzira kuti diaphragm ifambe, uye inoshandisa tsvimbo yekusundira pane diaphragm kubatsira vanhu kuti vapfuurire nekusundira bhureki rekumedura kuburikidza nechinhu chakabatana chekufambisa.
Mune isiri kushanda nyika, iyo yekudzoka chitubu chevharuvhu vhara pini tsvimbo inosundira iyo yekudzvinyirira vharuvhu yekukanda tsvimbo kune yekukiya chinzvimbo kurudyi, uye vharuvhu vharafu chiteshi chiri pachena nyika. Yekutonga vharuvhu chitubu inoita yekudzivirira vharafu mukombe uye yemhepo vharuvhu chigaro padhuze nekubata, nekudaro ichivhara mhepo vharafu chiteshi.
Panguva ino, iyo yekutsva gasi mukamuri uye yekushandisa gasi mukamuri yeiyo booster inoziviswa pamwe nekushandisa gasi mukamuri mugero kuburikidza neyekutsva gasi mukamuri chiteshi cheiyo pisitoni muviri kuburikidza neanodzora vharuvhu mhango, uye vari voga kubva ekunze mhepo. Mushure mokunge injini yatanga, iyo vacuum (isina kunaka kumanikidza kweinjini) pakudya kwakawanda kweinjini ichakwira kusvika -0.0667mpa (kureva kuti, mweya wekumanikidza kukosha ndi0.0333mpa, uye musiyano wekumanikidza nemhepo yekumhepo iri 0.0667mpa ). Shure kwaizvozvo, booster vacuum uye vacuum yekamuri yekushandisa yakawedzera kusvika -0.0667mpa, uye vakagadzirira kushanda chero nguva.
Kana uchimedura, bhureki rinodzvanywa rinodzvanywa, uye simba rinosimudzwa rinokudziridzwa nemubati uye rinoshanda padanda rekusunda revhavha yekudzora. Kutanga, iyo yekudzosa chitubu chevharuvha vharuvhu tsvimbo tsvimbo yakamanikidzwa, uye yekudzivirira vharafu pusha tsvimbo uye mweya vharuvhu mukoramu kuenda kumberi. Kana iyo vharuvhu yekudzvanya pombi inofamba ichienda kumberi uko iyo yekudzivirira vharafu mukombe inosangana neyevhavha vharuvhu chigaro, iyo yekuvhara vharafu chiteshi yakavharwa. Panguva ino, booster vacuum uye yekushandisa kamuri zvakaparadzaniswa.
Panguva ino, kupera kweiyo vharuvhu yemhepo inongobata pamusoro peiyo reaction disk. Sezvo vharuvhu yekudzora pombi inoramba ichienderera mberi, chiteshi chevharuvhu yemhepo chinozovhurika. Mushure mekusefa kwemhepo, mweya wekunze unopinda mukamuri yekushandisa yeiyo booster kuburikidza neakavhurika mweya vharuvhu chiteshi uye chiteshi chinotungamira kune yekushandisa mhepo mukamuri, uye iro servo simba rinogadzirwa. Nekuti izvo zvinhu zvekuita ndiro ine zvinodiwa nemidziyo yezvipimo zvakaenzana zveyunifomu yekumanikidza pane yakamanikidzwa nzvimbo, iyo servo simba inowedzera mune yakatarwa chikamu (servo simba ratio) pamwe nekuwedzera zvishoma nezvishoma kwekuisa simba kweanodzora vharuvhu yekumanikidza tsvimbo. Nekuda kwekuganhurirwa kweservo simba zviwanikwa, panosvika simba repamusoro servo, ndiko kuti, kana dhigirii rekuvharisa remukamuri yekushandisa riri zero, iro servo simba ichave inogara isingachachinjizve. Panguva ino, iyo yekuisa simba uye yekubuda simba yeiyo booster ichawedzera neiyo yakafanana huwandu; kana mabhureki akanzurwa, iyo vharuvhu yekudzora pombi inodzokera kumashure nekuderera kwesimba rekuisa. Kana iyo yekuwedzera yekuwedzera poindi yasvika, mushure mevharuvha vharafu chiteshi ichivhurwa, booster vacuum uye yekushandisa mhepo mukamuri zvakabatana, iyo vacuum degree reiyo application mukamuri inoderera, iyo servo simba ichaderera, uye iyo pisitoni muviri unodzokera kumashure . Nenzira iyi, simba rekuisa parinodzikira zvishoma nezvishoma, iro servo simba rinodzikira muchikamu chakatarwa (servo force ratio) kusvikira brake yaburitswa zvachose.
Auto akamedura, Aftermarket Brake Booster, Power akamedura Booster, Vacuum akamedura Booster, Booster Assy Brake, Akaputsa Servo,